Wasiirka Arrimaha Gudaha Shirka Gobolada Sh/Dhexe iyo Hiiraan Waxuu Furmayaa 1-da September – STAR FM SOMALIA
Wasiirka Arrimaha Gudaha Shirka Gobolada Sh/Dhexe iyo Hiiraan Waxuu Furmayaa 1-da September
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha & Federalka Somaliya, C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa), ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in Shirka Maamul U Samaynta Gobolada Hiiraan & Shabeellaha Dhexe, uu furman doono 1-da bisha September.
Hadalka Wasiirka, ayaa wuxuu ka dambeeyay markii Madaxtooyada Magaalada Muqdisho maanta lagu qabtay kulan, kaasoo looga hadlaayay Maamul U Samaynta Gobolada Shabeellaha Dhexe & Hiiraan.
Gudoomiye-yaasha Gobolada Hiiraan & Shabeellaha Dhexe iyo 11 ka mid ah Golaha Wasiirada Somaliya, ayaa saxiixay Shirka Maamulka loogu soo dhisaayo Goboladaasi.
Madasha kulanka ka qabsoomay Villa Somalia, ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Madaxweynaha Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, Beesha Caalamka, Wasiirada & Xildhibaanada ka soo jeeda Goboladaasi iyo marti sharaf kale.
Wasiirka Arrimaha Gudaha, ayaa bidhaamiyay mudada ka harsan sanadkan in lagu soo dhisi doono Maamulkaasi, iyadoo ay markaasi u dhan tahay bulshada degta Gobolada Shabeellaha Dhexe & Hiiraan.
Wasiir Odawaa, ayaa si rasmi ah uga gaabsaday halkii lagu qaban lahaa Shirka Maamul U Samaynta Goboladaasi, xilli Siyaasiyiinta Goboladaasi ay si cad isugu khilaafsan yihiin, halkii uu ka qabsoomi lahaa.
Dowladda Federalka Somaliya, ayaa waxay u muuqataa mid juhdi ku bixinaysa Dhismaha Maamulkan, xilli juhdigii ugu badnaa ay ku bixisay Maamulkii Magaalada Cadaado lagu dhisay 4-tii bishii hore ee Luulyo.
Inta u dhaxeyso Afgooye iyo Leego maanta ka bilowday Hawlgal wado furis ah